SBO: Sagalee Bilisummaa Oromoo, Hagayya 11, 2017 – Kichuu
Oromiyaa Harmeekoo Lammaa Magarsaa Oromiyaa gurgurate
#LammaaMagarsaafi Abdii Alleey walii galtee daangaa Oromiyaa irraa muranii Sumaalef kennuuf raawwatameen torbee kana keessa LammaaMagarsaa humna korabittinneessaa daangaa irratti bobbaasisuun lafa Oromoo dabarsanii Sumaalef kennaa jiru. Wanti nama ajaa’ibu yeroo uummanni keenya daangaa nuti Sumaalee jalatti hin bullu jedhamee jedhee mormatu waraanni liyyuuhayl fi korabittinneessaa ilmaan Oromoo hidhaa fi ajjeechaa haala hammaataa taheen uummata keenyarratti raawwachas jira.
Kanaan dura referendamiin gaggeeffamee daangan Oromiyaa fi sumaalee addaan bahee ture. Lammaa Magarsaa yeroo hawaasa keessa deemee haasa’aa turee fi miidiyaa irratti dubbachaa ture lafti Oromiyaa taakkun takka Oromiyas irraa hin muramtu jechaa ture.
Yeroo ammaa humnaan duulli Oromiyaa sumaalef ciruu Abdii Allee fi Lammaa Magarsaan gaggeeffamaa jira.
Abdii Alleey humna waraanan daangaa Oromiyaa weeraree uummata Oromoo irraa godaansisuun sumaalota irra qubachiise. Lolli taasifamaa ture uummata daangaa lameenii guddutti osoo hin taane waraana Abdii alleey wayyaanen gaggeessituu fi uummata Oromoo giddutti. Oromiyaan mootummaa ofii waan hin qabneef lammiin Oromoo daangaa irratti dhumaa jira.
Wayyaanen ergama #MallasZenawi
“ኦሮሞ ና ኦሮሚያን ማቃናስ እንችላለን”( uummata Oromoo fi Oromiyaa hir’isuu ni dandeenya” kan jedhu yeroo ammaa hojirra oolchaa jiru. OPDO fi Lammaa Magarsaas kaayyoo wayyaanen filatteef hojirra oolchaa jiru.
Uummanni keenya guutummaa Oromiyaa keessaa dammaqnee yeroon daangaa Oromiyaa itti kabachiifannu amma.
Har’a teenyee yoo ilaalle boru lafaa fi lafee Oromiyaa gurgurachuuf teessi.